13 Tilmaamaha Noocyada Naqshadeeye kasta oo ay tahay inuu tixgeliyo | Abuurista khadka tooska ah
Qaab qorista qoraalku waa tiir taageera naqshad kasta. Dabool wanaagsan ayaa qiimo yar haddii suugaanta qoraalka buuggu waa midka khaldan, haddii aan la daryeelin cabirkiisa, haddii kala sarraynta aysan kala caddeyn, haddii akhristaha ku daalayo markuu fiirinayo bogagga.
Si waxaad xiisaynaysaa qoraalka halkan waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad aqriso buugga Enric Jardí ee cinwaankiisu yahay 22 Talooyin ku saabsan nooca qoraalka, halbeeg lagu qiimeeyo berrinka. Xaqiiqdii, qoraalkani wuxuu ku saleysan yahay qayb ahaan macluumaadka lagu soo bandhigay si ku-meel-gaadh ah oo madadaalo leh.
1 13 Talooyin ku saabsan nooca qoraalka
1.1 Adeegso 2 nooc
1.2 Qaab qorista ayaa sidoo kale gudbisa
1.3 Fariimahaagu uma muuqdaan kuwo ku wanaagsan cabbir kasta
1.4 Ka taxaddar luqadaha
1.5 Jidhku lamid maaha cabirka
1.6 U dhiib waraaqahaaga daabacaha
1.7 HA ISKU BADALIN nooc
1.8 Ka taxaddar kala sarraynta
1.9 Isticmaal shabakad saldhig ah (haddii aad rabto)
1.10 Iska yaree kala dheereynta iyo kala fogaanshaha khadka cinwaanada
1.11 La soco cinwaanka iyo iskuxidhka cinwaanka
1.12 Fiiro gaar ah u yeelo qoraalka
1.13 Daaqadda Qeybinta iyo Xaqajinta: arrin tijaabo iyo qalad ah
13 Talooyin ku saabsan nooca qoraalka
Adeegso 2 nooc
Way ku filan yihiin, uma baahnid 6 (waxaa lagu qori karaa oo kaliya boodhadhka, tusaale ahaan).
Qaab qorista ayaa sidoo kale gudbisa
Isku mid maaha in loo isticmaalo Times New Roman (xarrago laakiin edeb daran) marka loo eego Helvetica (mid caalami ah oo aad u xun, laga yaabee), ama Courier New oo aan ka ahayn FF DIN. Isku day inaad hubiso in waxa farta qoraalka ay gudbineyso ay waafaqsan tahay farriinta ay gudbineyso.
Fariimahaagu uma muuqdaan kuwo ku wanaagsan cabbir kasta
Qaab kasta waxaa loo qaabeeyey cabir gaar ah. Sida caadiga ah waxaan garan karnaa in xarfaha meydadka yaryar ay leeyihiin qalfoof ballaaran oo uu jiro farqi yar xagga dhererka u dhexeeya kiiska sare iyo kan hoose; weliba, meelaha ugu dhuuban ayaa qaro weyn. Tusaale ahaan waxaa noqon lahaa Nimrod, oo foolxumo ku ah jirrada waaweyn aadna looga akhriyi karo meydadka yaryar.
Ka taxaddar luqadaha
Waxaad tusaale u qaadaneysaa buug, waxaad dooraneysaa font leh lahjadaha, astaamaha su'aasha iyo calaamadaha dhawaaqa, 4 XNUMX XNUMX bilood ka dib waxay kuu sheegayaan inaad u baahan tahay inaad daabacad gaar ah u sameysid waddan carbeed. Ninkaasi ma leeyahay jilayaasha aad u baahan tahay? Tani waa wax aad muhiim u ah in lagu xisaabtamo shaqadan oo kale, oo la ballaarin karo. Si looga fogaado inaad qatar u gasho, isticmaal kuwa ugu fiican ee iibinaya cinwaanka oo hubi in, haddii aad u baahato, aad iibsan karto xirmada dabeecadda ah ee adiga kugu habboon.
Jidhku lamid maaha cabirka
11-jirka Adobe Garamond Regular iyo Helvetica Neue oo isla jir ah, iskumid maahan. Xaqiiqdii, haddii aan ku wada isticmaalno isku qoraal hal erey waxaan arki doonnaa in indhaheennu u baahan yihiin inay boodaan si ay u akhriyaan Helvetica Neue. Si loo waafajiyo cabbirka, waxaa ugu wanaagsan in "isha lagu habeeyo" iyada oo la qaadanayo X-da font kasta tixraac ahaan Xaaladdan oo kale, waxaan uga tagi doonnaa Adobe Garamond Regular-ka melee 11 oo waxaan u yareyn doonnaa Helvetica Neue illaa melee 8'4.
U dhiib waraaqahaaga daabacaha
Waa wax aad u fudud in habka daabacaadda qoraalkeenna ha lagu beddelo mid kale. Si taas looga fogaado, waxa ugu fiican (marka laga hadlayo InDesign) waa xulashada Xirmada (Faylka> Xidhmada); iyo hadaanay ahayn, abuur PDF sidoo kalena keen faylka farta u dhiganta ee la adeegsaday (haddii aan isticmaalno laba, ka dibna laba). Dabcan: sifiican u hubi liisanka fartaada font, maxaa yeelay hadaanay kuu oggolaanayn inaad saxaafadda u dhiibto, waxaad galaysaa sharci darro.
HA ISKU BADALIN nooc
Ha koobin, hana sii ballaadhin. Ha kala bixin. Sidoo kale ha sameynin geesi been ah, ama faallooyin been ah, ama duubab yar yar oo been ah. Waxaad burburineysaa sanado shaqo laga bilaabo xirfadle naftiisa iyo naftiisaba u huray dejinta iyo naqshadaynta xaraf kasta afartan kun oo jeer.
Ka taxaddar kala sarraynta
Waa in si dabiici ah loo milmaa oo laga fahmaa jaleecada hore waa maxay cinwaanka koowaad, kan labaad, saddexaad ...
Isticmaal shabakad saldhig ah (haddii aad rabto)
Tani waxay ku siin doontaa halabuur aad u tiro badan, maadaama khadadka qoraalka ay isku joogi doonaan.
Iska yaree kala dheereynta iyo kala fogaanshaha khadka cinwaanada
Haddii aad isticmaasho cabirro noocyo waaweyn ah, waxaa lagugula talinayaa inaad ku sameyso isha.
La soco cinwaanka iyo iskuxidhka cinwaanka
Dib u habeyn raadinta iyo jarista sidaas darteed ma jiraan wax farqi ah oo u dhexeeya meelaha cad.
Fiiro gaar ah u yeelo qoraalka
Maxaa xigashooyin ah in la isticmaalo? Sidee loo qoraa xigasho buug? Akhrin wanaagsan (si weyn loogu taliyay) inaad waxaas oo dhan barato waa buugga la yiraahdo Qaab-dhismeedka 'orthotypography' ee naqshadeeyayaasha, waxaa qoray Raquel Marín Álvarez (€ 19 ee Gustavo Gili).
Daaqadda Qeybinta iyo Xaqajinta: arrin tijaabo iyo qalad ah
para iska ilaali agoonta iyo carmalka, gudigan InDesign waa muhiimadda ugu weyn. Adoo wax ka beddelaya qiimaha ka muuqda, waxaan ku guuleysan karnaa dhismo qoraallo si wanaagsan loo sameeyay. Khiyaanada? Ma jiraan, dhammaantood waa arrin isha wanaagsan iyo habka tijaabada-qaladka. Kalsoonow!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 13 Talooyin ku saabsan qaabeynta naqshadeeye kasta oo ay tahay inuu tixgeliyo
Talo aad u wanaagsan, ^ _ ^
Kaliya hal faallooyin: Qodobka 6 waxaan dhihi lahaa "u dhiib qoraaladaada daabacaha ... haddii shatigu u ogolaado." Haddii kale, waa sharci darro. Inta kale waa talo fiican.
Dhibic wanaagsan Octavio, waxaan dhammaystiray barta 6 hadda;)
DAGAALKII QUDUS dijo
Ilaahayow, »Times New Roman (xarrago laakiin edeb daran)» Horaanba waan u lumay hamigii aan ku akhrin lahaa inta soo hartay si daacadnimo ah ayaa iiga tagaysa wax badan oo aan ka fekero ...
Ku jawaab SANTOS GUERRA
Waxaan rajeynayaa in faallooyinka ku saabsan Times New Roman aysan ku dhibin. Xaqiiqdii, waxaan la wadaagay fikrad isku mid ah oo Enric Jardí uu ku muujiyay buugga 22 Talooyin Naqshadaha (oo qoraalkani ku saleysan yahay). Dabcan, waa fikrad shaqsiyeed iyo mid shaqsiyeed oo aadan aqbali karin.
Maxaa ku dhacaya Times New Roman waa in illaa iyo inta la adeegsan jiray, ay "lumisay dhalaalkeedii." Waxay ku dhacdaa wax kasta oo la qaddariyo oo la qadariyo si aad ah oo si nidaamsan loogu adeegsado meel kasta, waxoogaa la mid ah wixii ku dhacay Helvetica ... Laakiin waxaan hore u idhi, iyagu waa fikrado gebi ahaanba ku saleysan.
Waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad sii wado aqrinta boostada, maadaama aad ku heshiin karto qodob kale :)